मलाई दे,खेर थु,क नि,ल्छन भने मेरो के दो,ष
साउन ३०, २०७८ शनिबार 132
मलाई देखेर थु,क नि,ल्छन भने मेरो के दो,ष यो भनाई कलाकार रिया श्रेष्ठको हो । केही समय अगाडी उनले बोलेको यो कुरा अहिले निकै चर्चामा रहेको छ। रिया श्रेष्ठ कुशल नृत्यंगना मोडल अनि कलाकार हुन्। उनले केही फिल्म र धेरै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छन्। नाच्नु उनको रुचिको विषय हो।”बाहिर देखाउने माया रियालाई कृत्रिम जस्तै लाग्छ। रिया दर्शक श्रोताको माया र हौसलाले मक्ख छिन्। भन्छिन्, ‘काम नै मेरो लभर, दर्शक नै मेरो खुसी। आमा मेरो जिन्दगी।
रियाले जन्जिर त्रास के म तिम्रो होइन र श्री ५ अम्बरे द रिटर्न हिरो लगायतका केही फिल्ममा अभिनय गरेकी छन्। तीन दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरिसेकी छिन। केही फिल्म प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छन्। उनलाई कलाकारितामै निरन्तरता दिने रहर छ।”यसैले पनि हरेक दिन केही न केही सिकिरहेकी हुन्छिन्। रिया दर्शक श्रोताको माया र हौसलाले मक्ख छिन्। भन्छिन्, ‘काम नै मेरो लभर दर्शक नै मेरो खुसी। आमा मेरो जिन्दगी।
केही वर्षअघिको कुरा हो उनी ताहाचल सावित्री सदनमा फिल्मको सुटिङ हेर्न गएकी थिइन्। निर्माता निर्देशकको आँखामा परिन् उनी। त्यहीँ एउटा फिल्ममा उनले एक सिनमा अभिनय गर्ने मौका पाइन्। निर्माता मौनता श्रेष्ठले बोस नामक फिल्म बनाउँदै थिए।”कहिलेकाहीं स्त”नमा गाँठो बन्न जान्छ यो आफैलाई थाहा हुँदैन । पछि त्यही गाँठो विस्तारै क्यान्सरमा परिणत हुन्छ । नियमित मसाज गर्यो भने आफैले गिर्खा वा गाँठो समयमा नै पत्ता लगाउनाले तुरुन्त उपचार भई खतराबाट बच्न सहज हुन्छ ।पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
Prevहिजो मैले छोएको पानी नखाने मान्छेले आज मैले दिएको औषधि खालान त ? डा. राम जी को कथा
Nextजब सारंगी बजाउँदै जोगीको भेषमा २२ वर्षपछि श्रीमान भिख माग्न घरमै आइपुगे विधवा बनेर बसेकी श्रीमतीको होस् उडयो
कुलमान बाहेक अर्काे मान्छे छैन त ? कुलमान बूढाे भएपछि सरकारले के गर्छ ? : गजेन्द्रबहादुर महत
आ,रोपी लोकबहादुर एक दिन औषधि छुट्दा यस्तो सम्म हुन्थे, बिचरा ती सोझा बा किरिया बस्दै ! हेर्नुहोस्